काठमाडौं, १६ वैशाख । कुनै पनि सहरलाई सुन्दर बनाउन पुलहरुको निकै ठूलो भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि आकर्षकरुपमा बनाइएका पुलले सहरलाई स्वर्ग जस्तै बनाइदिन्छन् । केही त्यस्ता पुलहरुलाई तस्वीरमा कैद गर्दा कस्ता देखिएलान् ? आउनुहोस् तपाई पनि यी पुल हेरेर एकछिन आनन्द लिनुहोस्-
१. यो टेम्स नदीमाथि बन्दै गरेको पुल हो जसलाई गार्डेन ब्रीज वा बगैंचासहितको पुल पनि भनिन्छ । थोमस हेथरविकले टाइटानिकको एउटा दृश्यबाट प्रभावित भएर यसको डिजाइन गरेका हुन् । करीब उच्च लागतमा बन्न लागेको यो पुल निर्माणलाई सन् २०१८सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२. ताइवानको राजधानी ताइपेइमा रहेको यस डाङजियाङ पुलको डिजाइन जाहा हाडिड आर्किटेक्टस् कम्पनीले गरेको हो । निर्माण भईसकेपछि यो पुल एउटा मात्रै टावर रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो पुल हुनेछ ।
३.चीनको झाङ्शामा रहेको यस पुलको नाम लक्की नट पुल राखिएको छ । नेक्स आर्किटेक्टसले डिजाइन गरेको यो पुल अर्को वर्षबाट संचालनमा आउने जनाइएको छ । यसको आकार तथा नामले गुडलक वा सौभाग्य भन्ने जनाउँदछ ।
४. स्विडेनको सोल्भ्सवर्गमा बनेको यो पुल मानिस हिड्न बनाइएको युरोपकै सबैभन्दा लामो पुल हो । २४८० फिट लामो यो पुलमा लेड प्रणालीका कारण विभिन्न रंगहरु देखिन्छन् ।
५. सिंगापुरको मरिना बेमा सन् २०१०बाट संचालनमा आएको यो पुललाई हेलेक्स पुलको नामले चिनिन्छ । यसको आकारले जीवन, नवीकरण तथा उन्नतिलाई संकेत गर्दछ ।
६. डेनमार्कको कोगे नगरमा रहेको यो पुल कोबे आर्किटेक्स र विटलिङ कोवीले संयुक्तरुपमा डिजाइन गरेका हुन् । रेल तथा कार हिड्ने गरी बनाउन लागिएको यो पुलमा फ्युल स्टेशन र पार्किङको सुविधा रहने छ । यो पुल सन् २०१८बाट संचालनमा आउने बताईएको छ ।
७. उरुग्वेको गार्जनमा रहेको यो पुलको डिजाइन राफेल भिनोलीले गरेका हुन् । यो पुल माथिबाट हेर्दा निकै सुन्दर देखिन्छ ।
८. स्पेनको बार्सिलोनामा बन्दै गरेकोे यो पुललाई साराजेभो पुल भनिन्छ । यो पुल वरपर हरियो घाँस रोपिएको छ भने बिजुली बिना नै झलझल बल्ने ढुङ्गा तथा कंक्रिट प्रयोग गरिएको छ जसले प्रदुषण गराउने तत्वलाई परिवर्तन गरेर वातावरण मैत्री बनाउँदछन् ।
९.डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको यो पुललाई सर्कलब्राउन पुल भनेर नामाकरण गरिएको छ । ओलाफर एलासनले डिजाइन गरेको यो पुलमा रहेका भागलाई हेर्दा बन्दरगाहमा डुङ्गा तैरिए जस्तो देखिन्छ ।
१०.चीनको झ्याङलालेमा रहेको यो पुललाई हालै मात्रै संचालनमा ल्याइएको हो । ६९ फिट लामो र ७१८ फिट लामो यो पुललाई बन्जी जम्प तथा फेशन शोका लागि पनि प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
११. लण्डनमा निर्माण भईरहेको यो पुलको नाम नाइन एल्मस पुल राखिएको छ ।